Nhetembo dzaCarmen Conde, nyika yakapfuma mumifananidzo uye madimikira. | Zvazvino Zvinyorwa
Carmen Conde: nhetembo
John Ortiz | | Biography, Vanyori, Type, Literature, Nhetembo
Carmen Conde: nhetembo - Pensamientoscelebres.com.
Kuisa "nhetembo dzaCarmen Conde" painjini dzekutsvaga pawebhu kutsvaga hupfumi uye hwakazara hwetsamba. Mudetembi uyu Musi waNdira 28, 1978, akazove mukadzi wekutanga kupinda muRAE panguva ye-- ipapo - makore 173 ekuvapo kwechirongwa. Kuburitswa kwake hakuna kupokana nekuda kwake nekubatana kwemurume wake kuFalangists ehurumende yeFrancisco Franco. Asi zvakarerekera kukoshesa vadzidzi chete nekuda kwezvematongerwo enyika. Mukuwedzera, iye anozivikanwa seimwe yeakakurumbira hunhu hweanonzi Chizvarwa che27.
Carmen Count Akazvarwa muCagagagag munaAugust 15, 1907, aive munyori akasimba uye akamira semunyori wemitambo, prose munyori uye mudzidzisi. Kubva achiri mudiki kwazvo aive akabatanidzwa patsika nematsamba, nekudaro vamwe vanamazvikokota vanofunga kuti kuburitswa kwe "chete" anenge mazana matatu emakopi ebasa rake hakuna kukwana. Nezve rake rekuzvarwa zana, iro pepanhau Nyika akaita chinyorwa chemutero uko nhetembo yake inotsanangurwa se "lyrical, nyowani, yenyama."
1 Vechidiki, mabasa ekutanga uye kurudziro
2 Mushure mehondo uye kunyora kukura
3 Nhetembo dzichangoburwa nenhaka yaCarmen Conde
4 Zvimiro zvebasa rake uye nedzimwe nhetembo dzake dzinomiririra
5 Carmen Conde nhetembo
5.5 "Zvese zvakasikwa zvine maziso"
Vechidiki, mabasa ekutanga uye kurudziro
Inofungidzirwa kuti simba rake rakakura rakakunda Mubayiro weNobel, Juan Ramón Jiménez. Saizvozvo, mutsamba yaakachengeta kweanoda kusvika makumi manomwe emakore nanyanduri Ernestina de Champourcín, kuyemura kwake vanyori vakaita saGabriel Miró, Santa Teresa naFray Luis de León kunoonekwa.
Basa rake rekutanga raive muna 1923 semubatsiri wekamuri kuSociedad Española de Construcción Naval Bazán. Kwapera gore, akazova mupepanhau anobatsira. Akadzidza Kudzidzisa paNormal Chikoro cheMurcia, ndipo paakasangana nanyanduri Antonio Oliver, waakaronga hukama naye muna 1927 ndokuroora muna 1931.
Munguva iyi akaburitsawo ake ekutanga mabhuku enhetembo: Kurambidza (1929), ane chirevo cheprozi inzvimbo izere nemwenje yeMediterranean; Y Fara (1934), yakanyorwa panguva yepamuviri pake, apo paanoratidza kudzika kukuru kuratidza madingindira aripo.
Zvinosuruvarisa, mwanasikana wavo mumwechete akaberekwa akafa muna 1933. Iyo nhamo yakaratidza basa rake kusvikira asangana naAmanda Junqueras, waakange aine rudo rune hunyanzvi rwakakurudzira mamwe emabasa ake enyama, akatakurwa neeroticism nemadimikira ane chekuita nerima nemimvuri (zvichinongedzera kune zvakarambidzwa), senge Kushuva nyasha (1945) uye Mukadzi asina Edheni (1947), pakati pevamwe.
Mushure mehondo uye kunyora kukura
Mushure meSpanish Civil War (1936-1939), Count nemurume vaive nhengo dzekutanga dzeYunivhesiti Yakakurumbira yeCagagena uye kubva kuVhiki reVhiki reRubén Darío paYunivhesiti yeMadrid. Nguva dzakaoma dzakapfuura, nekuti nekuda kwekutanga kuomerera kwaOliver kuRepublic, vaviri vacho vakamanikidzwa kuramba vakaparadzana kwenguva yakareba.
Mumakore akatevera Carmen Conde akashanda semupurofesa wezvinyorwa zveSpanish kuInstitute of European Studies uye kuYunivhesiti yeValencia (muAlicante). Ino zvakare inguva inoratidzwa nemusanganiswa wayo, zvinoonekwa munhetembo dzakadai se "MuNyika Yemunhu« (1960) inotongwa nekunzwa kusurukirwa uye kunyoreswa.
Nyanduri Carmen Conde.
Saizvozvowo, basa rake Padivi rino rekusingaperi (1970), anozivisa chinzvimbo chake chekumukira mukutarisana nekusarongeka munharaunda. En Ngura (1975), inoratidzira nezve hupenyu, kufa uye kurwadziwa (zvakakanganiswa nerwendo rwake rweNew York uye kufa kwemurume wake). Misoro iri kuvandudzwa mukati Nguva rwizi runononoka rwemoto (1978) uye Husiku hwakasviba hwemuviri.
Nhetembo dzichangoburwa nenhaka yaCarmen Conde
Pakati pemubairo wakatanhamara wakapihwa Carmen Conde ndiwo Elisenda Montcada Prize (1953) ye Iyo yakasviba midzi, Mubairo Wenhetembo weNyika (1967) uye Seville Athenaeum Prize (1980) na Ndini amai. Muna 1978 akaita nhoroondo nekuve mukadzi wekutanga akapinzwa muRoyal Academy yeMutauro wechiSpanish.
Conde akabatanawo muLa Estafeta Literaria neRNE pasi pezita rekunyepedzera raFlorentina del Mar. Saizvozvo, Spanish Terevhizheni yakachinjisa mabasa ake kuita madiki skrini akateedzana Rambla y Iyo yerba yakakura gobvu.
Mukutanga kwema1980 munyori akaratidzira zviratidzo zvekutanga zveAlzheimer's. Zvisinei, kurwara hakuna kumutadzisa kushambadza muunganidzwa wake wazvino wenhetembo, Mazuva akanaka muChina (1987), kwaanoratidza kuyemura kwake tsika yeiyo hofori yeAsia, mushure mekuishanyira. Akafa muna Ndira 8, 1996 kuMajadahonda, aine makore makumi masere nemasere.
Zvimiro zvebasa rake uye nedzimwe nhetembo dzake dzinomiririra
Iko kushandisa kwekunyepedzera kweiye wega mune nhetembo dzaCarmen Conde hazvina kururama uye dzimwe nguva hazvibvumike. Nenzira imwecheteyo, hunhu hwevatambi hunoviga ivo kuti vadzikise zvirevo zvehunhu kuburikidza nekukumbira kwemweya uye nekushandisa zvisazitasingwi zvirevo.
Munyori anenge nguva dzose anozivisa mudiwa nenzvimbo. Izvo zvinhu zvemuviri zvinowanzoitika, zvinoratidzwa kuburikidza nehumwe hunhu hwehunhu. Chido chekurambidzwa uye kunyarara zvakajairika kuburikidza nemadimikira nezve husiku uye kusaziva kusaziva.
Nhetembo yake ndeye mahara, inoshaya nhetembo, asi kwete zvine mutsindo. Mutauro wake ndewechisikigo, uye unoratidza kuraira kwakadzama kwemutauro, nemadimikira akadzika anobatanidza vaverengi uye anovakoka kuti vaverenge nekuverenga zvekare nhetembo imwe neimwe, ndima nendima. Iko kuunganidzwa kwaCarmen Conde, nekuda kwekudzika kwavo uye zvemukati, zvinofanirwa kuverengerwa pakati mabhuku akanakisa enhetembo.
Carmen Conde achizivisa nhetembo.
Carmen Conde nhetembo
Nhetembo dzaCarmen Conde ndedzepasi rose, zuva repasi rose renhetembo, Kurume 21, nhetembo dzake dzinoverengwa munzvimbo zhinji dzepasi. Pazasi iwe unogona kuona mashanu enhetembo anomiririra mukati meakakura enziyo yeCarmen Conde.
«Zvakafanana nekuseka mukati mebhero:
kunze kwemhepo, kana kukunzwa, kana kuziva chaunonzwa.
Nechiratidzo iwe unopedza husiku hwemuviri wako
uye ini ndinokuita kuti uve pachena: Ini ndiri iwe wehupenyu hwese.
Maziso ako haana kupera; vamwe mapofu.
Havajoini neni, hapana anoziva kuti ndeyako
kusafa kuno kufa kunorara mumuromo mangu,
apo izwi rinoshevedzera mumarenje ekuchema.
Nyoro nyoro dzinomera pahuma dzevamwe,
uye rudo runonyaradza rwoga nekurasa mweya waro.
Zvese zvinhu zvakapusa uye zvinopera panoberekwa vana,
uye pasi rine ruva uye mumaruva mune denga.
Iwe chete neni (mukadzi ari kumashure
yegirazi iro risingafadzi iri bhero rinopisa),
tiri kutarisa hupenyu ihwohwo ..., hupenyu
runogona kuva rudo, kana rudo ruchidhakwa;
zviri pasina mubvunzo kutambura, kana munhu achifara;
chiri, zvirokwazvo, icho chiedza, nekuti tine maziso.
Asi kuseka, kuimba, kudedera mahara
yekuda uye kuve wakanyanya kudarika hupenyu ...?
Kwete ndinoziva. Zvese zvinhu chinhu chandaiziva
uye saka, zvako, ndinogara muNyika ».
«Nekuti kuve iwe wakafanana, iwe wakasiyana
uye iri kure navose vanoona
iro rima rechiedza raunogara uchidurura
kubva kudenga rako kuenda kugungwa rako, munda wandinoda.
Munda wangu, werudo handina kumbobvuma;
zverudo zvine mwero uye zvine mwero,
semhandara yekare inotsungirira
mumuviri wangu uri padhuze newe wekusingaperi.
Ndava kuda iwe, kundiudza
mazwi ako egungwa nemichindwe;
zvigayo zvako zvetirairi zvaunoshereketa
Vanopedza nyota yangu kwenguva yakareba.
Ndinozvisiya mugungwa renyu, ndinozvisiya ndiri wenyu
Nzira yekuzvipa iwe unofanirwa kuzviita kuti uve iwe.
Dai ndakavhara maziso angu aisara
akaita munhu uye izwi: akanyudzwa ari mupenyu.
Ndauya here ndikasiya; Ndinenge ndaenda mangwana
uye ndichauya sezvazvakaita nhasi ...? Chii chimwe chisikwa
ndichadzoka kwauri, kuzogara
kana kupunyuka muchiedza chako kuenda kusati kwamboitika? ».
Chiumbwa mukuremekedzwa kwaCarmen Conde.
«Wakashama uye wakanamatira kushama kwako.
Mazamu angu akaita sechando changobva kutemwa
mumvura yakati sandara yechipfuva chako.
Mafudzi angu akapararira pasi pemapfudzi ako.
Uye iwe, uchiyangarara mukushama kwangu.
Ndichasimudza maoko angu uye ndichabata mweya wako.
Unogona kuburuka hope dzangu
nekuti denga richazorora pahuma yangu.
Mitezo yenzizi dzako ichava nzizi dzangu.
Tichafamba pamwe chete, iwe uchava seiri rangu,
uye ndichakuperekedza nemumakungwa akavanzika.
Iko kwakanyanya kudzikisira kwema geographies!
Maoko ako pamaoko angu.
Maziso ako, shiri dzemuti wangu,
muhuswa hwemusoro wangu ».
«Ndinofanira kuva nemweya munyoro
semhuka inosuruvara inotongwa,
kumufadza nemapikisi kutsetseka
yeganda rake rakapenya muunyoro.
Izvo zvinodikanwa kumudzikamisa, kuti fever yake
Handina kudedera muropa kweminiti.
Moto wemafuta ngaufukidze
mukobvu nekutyisa, uye kuti zvinoramba.
Oo mweya wangu wakapfava uye wakadzorwa,
chikara chinotapira chakazvivharira mumuviri wangu!
Mheni, kuchema, kutonhora, uye kunyangwe vanhu
kumukurudzira kuti abude. Uye iye, akasviba.
Ndinokumbira iwe, rudo, kunditendera
kupedza ingwe yangu yakasungwa.
Kukupa (uye kundisunungura kubva pahasha idzi),
kunhuwirira kwakadzikama, kusingaperi. '
"Zvese zvakasikwa zvine maziso"
ivo vanotiona, ivo vari kutiona isu, ivo vanotitarisa
maziso mazhinji asingaonekwe atinoziva ekare,
kubva kumakona ese epasi. Tinovanzwa
yakatarwa, inofamba, varanda uye varanda.
Uye dzimwe nguva vanotidzipa.
Tinoda kudaidzira, isu tinodanidzira apo nzara
Pamaonero asingagumi anotaridzika uye anokupedza simba.
Ivo vanozadzisa basa ravo rekutitarisa uye isu toonana;
asi tinoda kuisa zvigunwe zvedu pakati pemaziso ake.
Ivo kuti vaone,
kuti tigone kuona chiso nechiso,
shamhu kupokana neshamhu, kutora mweya wako kure
dense nekunetseka, kutya uye kuzvidya moyo,
chiono chakazara chatinoteedzera tese.
Ah, kana isu takakushamisa iwe, kongiri,
zvinowirirana pamusoro pemvura inoyerera yegirazi!
Uye isu tichafamba pamwe chete, tisingazviwani isu sevanhu venyama
vakakomberedza chisikwa chimwe chete chisina kugadzikana
iyo inoramba maziso ayo yagadzira.
Sei, kana tisiri kuzozviona, kunyangwe zvikatipofomadza,
akaita aya neaya asingaverengeke maziso? ».
Ndinokumirira pedyo nehusiku.
Matsime akadzika uye anotonhora
ivo vanofarira yangu yazvino.
Tarisa uone kuchena kwemadziva angu.
Mufaro wakadii iwoyo yelo wangu! ».
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Carmen Conde: nhetembo
Mabhuku mashanu nezve kukohwiwa kwamazambiringa. Kune vateveri vewaini yakanaka uye zvinyorwa
Nezvinangwa zvemutemo, iro bhuku redigital rakafanana nebhuku repepa?